ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများကို Instagram တွင်မည်သူသိမ်းမည်နည်း။ ➡️➡️နောက်လိုက်များ▷➡️
ဇွန်လ 16, 20190မှတ်ချက်များ 6925
Instagram ကိုကျွန်တော်များသောအားဖြင့်သူတို့ကသဘောကျတယ်ညွှန်းသို့မဟုတ်မှတ်ချက်ပေးခြင်း, အခြားလူကျနော်တို့တက်အကြောင်းအရာတုံ့ပြန်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို wadding, များစွာသောဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမျှဝေပါ။ ဒါပေမဲ့ Instagram ကိုအပေါ်မှာငါ့ဓါတ်ပုံသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သူကိုသိကျွမ်း ဒါဟာကျနော်တို့ကပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရှိနေစဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောကျွန်တော်တို့ကိုလာသောမေးခွန်းများကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သင်ဘယ်လို Instagram ကိုအပေါ်မှာငါ့ဓါတ်ပုံသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သူကိုသိကြပါသလဲ?
ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ Instagram ကိုကိုယ်ပိုင်အကောင့်တစ်ခုမှသင်တင်ထားသောအကြောင်းအရာကိုမည်သူသိမ်းဆည်းနိုင်သည်ကိုသိရန်နည်းလမ်းမရှိသေးပါ။ သို့သော်သင် "download လုပ်၍ ရသော application အချို့ကိုသင်ကြားဖူးသည်။အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး"ဒါမှမဟုတ်" ထဲမှာPlay Store ကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုပြောတာဝမ်းနည်းပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်းသို့သော်အင်တာနက်သို့မဟုတ် cordage ရှာဖွေအချို့လှည့်ကွက်အကြံပြုနိုင်ကြောင်း, မဟုတ်သလိုဖြေရှင်းချက်များမှာ။ တကယ်တော့ဒါဝေး Instagram ကိုအပေါ်မှာငါ့ဓါတ်ပုံသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သူကိုသိရန်တစ်ဦးတည်းသာလမ်းလည်းမရှိ။
ဒါဟာသင်အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာသို့မဟုတ် Instagram ကိုပေးသည်သောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်, တိုတောင်းသောခြေလှမ်းများအတွက်လုပ်ဆောင်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
သင့်ရဲ့ Instagram ကိုပရိုဖိုင်းကိုရန်ဝင်ရောက်မည်နှင့်ညာဘက်အပေါ်ထောင်ဖြစ်ကြောင်းသုံးခုဒက်ရှ်သို့မဟုတ်အစက်ကိုနှိပ်ပါ။
အတွင်းအပြင်ပြီးတာနဲ့စာနယ်ဇင်း "ချိန်ညှိချက်များ" နှင့် menu ကိုနှိမ့်ချတစ်စက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကို Select လုပ်ပါ "အကောင့်များ" နှင့်ကပြောပါတယ်သောနောက်ဆုံး option ကိုနှိပ် "စီးပွားရေးအကောင့်သို့ပြောင်းပါ" o "စီးပွားရေးအကောင့်သို့ပြောင်းပါ။ "
အဆင်သင့်ပြီးတာနဲ့သင်ကစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ် သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုစောင့်ရှောက်ကြသူသိပါ။ တကယ်တော့၊ ထိုအချိန်မှစ၍ သင်၏ပရိုဖိုင်းတွင်စာရင်းအင်းများပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်၏ဓာတ်ပုံများကိုတစ်စုံတစ် ဦး မှသိမ်းဆည်းသည့်အခါတိုင်းသူသည်အကြောင်းကြားစာတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ လူအများအပြားကမည်မျှလုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုတာသိရန်အတွက်“ စာရင်းအင်း” ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်စာရင်းတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူအားလုံး
ဤရွေ့ကားစာရင်းဇယားကြော်ငြာတွေထက်အများကြီးပိုပါတယ် အဘယ်သူကိုသင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံအချို့ကိုထုတ်ဝေသငျသညျကိုကြည့်ပရိသတ်ကိုထုတ်လုပ်သောသက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အသုံးများကြသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါပြီ။ ဒီလူမှုရေးကွန်ယက်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနေသောတကယ်တော့, များစွာသောလူ သူတို့ကသင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ၏အရည်အသွေးတိုင်းတာရန်ဒီ feature ၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ရမည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ငါတို့သည်အဘယ်သို့သူတို့ရှိရေးစာရင်းဇယားများမှာရှင်းပြပါလိမ့်မယ်နှင့်မည်သို့သူတို့သည်သင့်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
သင်ဓါတ်ပုံများကိုလွှတ်တင်နေကြသည်ကိုဘယ်လိုကောင်းသောသင်ထင်သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများကိုသိရန်လိုလျှင်, စာရင်းဇယားသင်တို့သည်ဤရလဒ်များကိုသိရန်ကူညီသောကွောငျ့ ၎င်းတို့သည်နောက်လိုက်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများ၏အချက်အလက်ကိုသိရုံထက်မကပါ။
ဒါပေမယ့်လူအတော်များများကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်လူဦးဟာသူတို့ရဲ့ Instagram ကိုအကောင့်အတွက်တုံ့ပြန်သောသူတို့အားအနေဖြင့်ပိုမိုသိရှိလိုပါက extract ဤ analytics ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်ကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလူမျိုး၏ပေမယ့်များစွာသောသံသယမရှိဘဲအားလုံးဤအချက်အလက် applications များရရှိရန်အခြားရွေးချယ်စရာကိုသုံး Instagram ကိုအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေတာကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Instagram တွင် "စာရင်းအင်း" အမျိုးအစား ၃ မျိုးရှိသည် - ကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ ကုမ္ပဏီ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများနှင့် Instagram ပုံပြင်များ။
Instagram ကိုအပေါ်မှာငါ့ဓါတ်ပုံကိုစောင့်သောသူထွက်ရှာရန်သင့်အားအလှည့်၌သငျအထွေထွေအကောင့်စာရင်းဇယားမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏သောဤ option ကို, အားဖြင့်သင်တို့လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းစာရင်းဇယားကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် တစ်ခုချင်းစီကိုအထူးသဖြင့်ထုတ်ဝေ၏။
ဤကိန်းဂဏန်းများကိုသင်ရရှိသည့်အချိန်သည်အပတ်စဉ်ဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်း၏ပေါ်လစီသည်ထိုအတိုင်းတည်ရှိပြီးယနေ့အထိအပြောင်းအလဲမရှိသေးပါ။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်လူမှုရေးကွန်ရက်ပေါ်တွင်အစီရင်ခံစာသို့မဟုတ်လစဉ်အစီရင်ခံစာပြုလုပ်သည့်အခါအပတ်တိုင်း "ဖန်သားပြင်များ" ကိုသိမ်းထားရမည်။
စာရင်းအင်းများအားသုံးသပ်ခြင်း Instagram ကို
ဤအစာရင်းဇယားစောင့်ရှောက်သောမက်ထရစ်တကမ္ဘာလုံးကြည့်ရှုအားပေးပေမယ့်အထူးသဖြင့်နဲ့ရနိုင် တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တွေ့ဆုံများနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား function ကိုဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့အမှုကိုပိုမိုရောင်းအား generate နှင့်ပိုပြီးဖောက်သည်ရဖို့ရန်လိုအပ်ပါသည်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင်ကသင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဘယ်အရာကိုသက်ရောက်မှုကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်အများပြည်သူနှင့်အားသာချက်များ Reception: သူတို့ဥပမာအားဖြင့်အချက်အလက်များများနားလည်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းအပြင် သင့်ရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး။ အလားတူပင်အားနည်း foci ဖြင့်တွေ့ကြံရန်, ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်အတူဖြစ်ပျက် သင်ပိုမိုအခွင့်အလမ်းများကိုအနိုင်ရသင်၏အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်တဲ့။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများကို Instagram ပေါ်တွင်မည်သူထိန်းသိမ်းထားသည်ဟူသောမေးခွန်းကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်မေးပါကသင်ထုတ်ဝေသောအကြောင်းအရာသည်မည်မျှကောင်းသည်ကိုသင်သိလိုသောကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင်နောက်လိုက်သူများအားတစ်နည်းနည်းဖြင့်သင်စိတ်ကျေနပ်စေရန်ရှာဖွေနေသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Instagram ကိန်းဂဏန်းများကသင်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်း၏အရည်အသွေးကိုသိရန်ကူညီပေးသည်။
လျှောက်လွှာစတိုးဆိုင်များတွင်သင့်အားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပေးသည်ဟုဆိုသော“ tools” များစွာရှိသည်။ သူတို့ကသင့်ကိုကူညီနိုင်သည့်အရာမှာ "Like" နှင့်မှတ်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, ပုံတူများနှင့်ဇီဝကလစ် link ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မ Instagram ကိုနှင့်စာရင်းဇယားများ၏လျှောက်လွှာ၌တည်ရှိ၏။
ဤသူအပေါင်းတို့သည် interaction ကစာရင်းဇယား Instagram ကိုပြသထားပြီး, သင်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများဖို့တုံ့ပြန်မှုကိုသိရန်ရှာဖှသေူမြားအတှကျအဓိကလမ်းညွှန်ဖြစ်ကြသည်။
ဒီ Instagram ရဲ့ကိန်းဂဏန်းများမှာ "Actions" လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းတခုရှိတယ်။ နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။ ထိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူငါတို့သည်တတ်နိုင်သမျှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပေတစ်သံလိုက်အဖြစ်လည်ပတ်နေကြသည်ရှိမရှိ တဦးတည်းတက်ပြီးပြီးနောက်အသစ်သောနောက်လိုက်ရရန်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ထုတ်ဝေမြင်ဘူးသောအသုံးပြုသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးချင်းစီထုတ်ဝေသီးခြားစီအကွာအဝေးရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဤသည်လည်းတစ်ဦးသည်လစဉ်အခြေခံပေါ်မှာတိုင်းတာသင့်ရဲ့ပို့စ်များကိုတုံ့ပြန်ကြောင်းတော်တော်များများပရိတ်သတ်တွေရဲ့ပေါင်းလဒ်တို့အပါအဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသောအထူးသဖြင့်နှင့်အတူ, အချို့လူတွေကိုပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီနယ်ပယ်ကအမြဲမှန်ကန်နှင့်သင်သည်အဘယ်သို့စဉ်းစားသင့်သည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားကြလိမ့်မည်။
ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဟူသောစကားလုံးသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး မှတုန့်ပြန်သောတုံ့ပြန်မှုရာခိုင်နှုန်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
အဆိုပါစာရင်းဇယားပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဒေတာများကိုပါလိမ့်မယ်, သင်လစဉ်အစီရင်ခံစာများ Instagram ကိုလုပ်လိုတဲ့အခါ, သင်အပတ်တိုင်း၏စာရင်းဇယားများရှိရမည်။
အားလုံးအသစ်ကနောက်လိုက်သငျသညျသတင်းအချက်အလက်အောက်ပါ၏ထို option ကိုနှိပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းသို့သွားရန်ရှိသည်ကတည်းကပရိုဖိုင်းကိုအမြင်များ, စိတ်ကူးထားတဲ့၏အရှိဆုံးသက်ဆိုင်ရာပေး။ ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဝင်နှင့်သင်အတိုင်းလိုက်နာရသောအခါဆိုလိုသည်, နောက်လိုက်အကြောင်းတရားများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။
ပိုများသောနည်းပညာပိုင်းအဖြစ်ဖော်ပြပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုသိရန်တစ်လမ်းလည်းမရှိ: လာရောက်လည်ပတ်သူ၏နံပါတ်အကြားအသစ်သောနောက်လိုက်များ၏အရေအတွက် 100% ကိုယ်ရေးအချက်အလက်။
စာရင်းအင်းများမှာလည်းကျွန်တော်တို့အပ်လုဒ်လုပ်ထားတော့အကြောင်းအရာကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုတည်ဆောက်ကြဖို့အရေးကြီးနေသည်တဲ့သူကိုသိရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသည်ဤအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများဖြစ်ခြင်း ta ကြောင်းသံလိုက်သိရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုဆိုလိုသည်။ သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမြျှောလငျ့နိုငျအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုကိုသင်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမဆိုကြည့်ရှုပြီးနောက်အသုံးပြုသူသူမ၏နောက်ကိုလိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တကယ်တော့, ဒီအပြန်အလှန်ကျနော်တို့က၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ရှာကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။
Instagram ကိန်းဂဏန်းများသည်ယခုအချိန်အထိပေးသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့်အတူကျော်ကြားသော "ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲ" ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ စုစုပေါင်းတွေ့ကြုံမြေားကိုပြသတဲ့အဆိုပါခန့်မှန်းအကွာအဝေး, interaction က link ကိုဇီဝကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလာရောက်လည်ပတ်သူကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အထက်အပိုဒ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အမိန့်ခုနှစ်တွင် Instagram ကိုအပေါ်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်သောကတော့များ၏အစီအစဉ်ထဲတွင်နေရာဖြစ်ပါတယ်။
တည်နေရာကို အသုံးပြု. ပိုစတာ
ယခုသင်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံများတည်နေရာ option ကိုပြသကြသငျသညျပုံကိုတည်းဖြတ်နေတဲ့အခါ, သငျသညျကိုထည့်သွင်းရမယ်ဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ လည်း တည်နေရာသင့်ရဲ့စာအုပျ၏ visualization နှင့် positioning ကိုတစ်ဦးသော့ချက်အခန်းကဏ္ဍ နှင့် ပို. ပင်ကဇာတ်လမ်းများ Instagram ကိုကြွလာသောအခါ။
သေချာတာပေါ့သင်သည် hashtags ကိုရှိသည်အများအပြားမြေားကိုဖြတ်ပြီးလာကြပြီနှင့်သင်အဘယ်သူမျှမသဘောမျိုးလုပ်ကြောင်းယူဆခဲ့ကြသည်။ မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်တကယ်တကယ်တော့အဲဒီမှာထိုကဲ့သို့သောများစွာဖြစ်ကြပြီးထူထောင်နေကြ အများပြည်သူအတွက်ကိုပိုပြီး interaction က generate နိုင်ရန်အတွက်။ သူတို့တစ်ဦးစီသည်အခြားချိတ်ဆက်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းနှင့်သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ကောင်းအခြားအသုံးပြုသူပိုင်ဆိုင်အခြားအကြောင်းအရာကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်နှိပ်ပါတယ်။
သူတို့စာပမြေားနှင့်အသစ်နောက်လိုက်များ၏ပင်မြင့်တက်အတွက် hashtags ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဘယ်လို သူတို့ကအစစာရင်းဇယား Instagram ကိုတိုင်းတာလျက်ရှိသည်။
1 သင်ဘယ်လို Instagram ကိုအပေါ်မှာငါ့ဓါတ်ပုံသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သူကိုသိကြပါသလဲ?
2 Instagram ကိုအပေါ်မှာငါ့ဓါတ်ပုံသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သူကိုသိရန်စာရင်းဇယားကိုသုံးပါ။
2.1 Instagram ကိုစာရင်းဇယားစာပမြေား
3 စာရင်းအင်းများအားသုံးသပ်ခြင်း Instagram ကို
3.9 တည်နေရာကို အသုံးပြု. ပိုစတာ
3.10 hashtags ကိုအားဖြင့်ပိုစတာ
အဘယ်မှာရှိ Instagram ကိုပေါ်မက်ဆေ့ခ်ျများမှာ